China Lab-use Disc-type jet mill QDB-50 QDB-100 QDB-150 orinasa sy mpanamboatra | Qiangdi
Jet Mill ampiasaina ao amin'ny Lab, izay ny fotokeviny dia: entin'ny rivotra tsindry amin'ny alàlan'ny tsindrona sakafo, ny akora nohamafisina ho haingana hafainganam-pandeha ary ampidirina ao anaty efitrano fikosoham-bary amin'ny lalana azo tsapain-tanana, nifandona ary nopotehina.
Jet Mill ampiasaina ao amin'ny Lab, izay ny fotokeviny dia: entin'ny rivotra tsindry amin'ny alàlan'ny tsindrona sakafo, ny akora nohamafisina ho haingana hafainganam-pandeha ary ampidirina ao anaty efitrano fikosoham-bary amin'ny lalana azo tsapain-tanana, nifandona ary nopotehina. Ny haben'ny sombiny dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny halalin'ny halavirana, ny fanerena ary ny hafainganam-pandehan'ny sakafo. Disc type Jet Mill dia mahomby amin'ny fitaovan'ny gummy.
1.Andiany kely fangatahana famokarana laboratoara, amin'ny fampiasana ny endrika biraonao.
2.Ny fahaizan'ny famokarana dia 50-300g batch, inona koa, afaka mahatratra 300-1000g batch izy, na dia 3-5kg batch aza eo am-panovana ny endrik'ilay fitaovana fanangonana. nyfamolavolana malefaka manalavitra tanteraka ny fampiasana modely milina samihafa.
3.Adopt tsotra fanangonana kitapo maody hitsitsy vola.
4.Misesy matetika ny fikosoham-bary hahatratra ny takiana amin'ny fineness.
Izy io dia ampiharina betsaka hanamafisana ny famotipotehana ny ores tsy metaly, ny metallurgy simika, ny fanafody tandrefana, ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa, ny simika sy ny ceramika momba ny fambolena, mety ampiasaina ao amin'ny Lab.
MODELY Antony fanamafisana Taham-pivoahan'ny rivotra fahafahana Fitotoana Vary
QDB -50 0,075 0.25m / min andiany 2 ~ 60g D97,5 ~ 40um
QDB-100 0.25 0.8m / min batch 50 ~ 300g D97,5 ~ 40um
batch 1 ~ 5kg
Teo aloha: Fitaovana mafy mafy Jet Mill
Manaraka: Ampiasaina any amin'ny laboratoara Jet Mill-fandriana Jet Mill ho an'ny fahaiza-manao 1-10kg